The Ab Presents Nepal » सरकारी जग्गामा नेकपा कार्यालय परे पछि कांग्रेसको चर्को बिरोध पछि सार्ने तयारी !
सरकारी जग्गामा नेकपा कार्यालय परे पछि कांग्रेसको चर्को बिरोध पछि सार्ने तयारी !
धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कार्यालय सार्ने बेलाका साविक एमाले कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ०७२ सालको भूकम्पमा बल्खुको केन्द्रीय कार्यालय भत्कियो । त्यसपछि कार्यालय सार्न भवन खोज्यौँ। उपयुक्त पाइएन। अनि पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानसँग आश्रय मागेका हौँ। अहिले पनि केन्द्रीय कार्यालय सार्न भवन खोजिरहेका छौँ, उपयुक्त पाइएको छैन । त्यसैले अब बल्खुमै बनाएर केन्द्रीय कार्यालय सार्ने तयारीमा छौँ।’
मौजुदा कानूनअनुसार, सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन। नाम नलेखिदिन आग्रह गर्दै पासाङल्हामु प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले भने, ‘मासिक दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी नेकपालाई दिएको भनिएको छ तर संस्थाको खातामा पैसा आएको देखिँदैन। भाडामा दिएको नभई आश्रय मात्र दिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।
०४८ सालको प्रतिनिधिसभाका सभामुख ढुङ्गाना नै पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका प्रथम अध्यक्ष हुन्। उनै अध्यक्ष छँदा प्रतिष्ठानले प्रयोग गरेको जग्गाबाटै काटेर शिक्षक संघलाई उपलब्ध गराइदिएको नेकपा नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले भने सोनाम छिरिङजी (पासाङका पति) ले पनि त्यसबेला चित्त बुझाउनुभो। सभामुख भइसकेको मान्छेले पहल गरेपछि नहुने कुरै भएन।
काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा पर्ने कित्ता २ रोपनी १५ आना जग्गा अहिले पनि शिक्षक संघले उपभोग गर्दै आएको छ। संघले तीनतले कार्यालय भवन भवन बनाएको छ। त्यसबाहेक जग्गामा सटरहरू बनाएर हार्डवेयर, जेसीभी स्काभेटर र अन्य कम्पनीलाई भाडामा लगाउँदै आएको छ।’
नेकपा नेता श्रेष्ठले भने, ‘हामीले पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानकै घरजग्गामा भूकम्पपछि केही समयका लागि कार्यालय राखेका मात्र हाै‌ं। हामी सकेसम्म चाँडो उक्त भवन छाड्छौँ। कांग्रेसले हामीमाथि प्रश्न उठाएको छ। उसको भगिनी संगठन शिक्षक संघको कार्यालय पनि त्यहाँबाट सार्नुपर्छ। उसले त आफ्नै घर बनाएर बसेको छ। त्यसमाथि अरुलाई भाडामा लगाएको पनि छ। त्यो गैरकानूनी काम हो। हामीमाथि प्रश्न उठाउनेले आफूले पनि छाडेर देखाउनुपर्छ काठमाण्डौ प्रेसले जनाएको छ ‘।